Inkukhu nempaka kuyofanele kuthelelane amanzi ukulwa nokuhlasela umhlaba - Bayede News
Inkukhu nempaka kuyofanele kuthelelane amanzi ukulwa nokuhlasela umhlaba
Ilungelo lokuphila kwabantu ligcizilelwa umuntu engakazalwa kuze kuyofika lapho ephefumula okokuqala emhlabeni emuva kokuzalwa. Kodwa isimo sakamuva sokwanda kwegciwane leCorona abantu sebelahlekelwa yilelo lungelo emazweni amaningi njengoba izibalo zithi bayizi-7 954 esebebulewe ileli gciwane emhlabeni. Lokho sekwenze izinhlangano zamazwe kanye nawo uqobo aphakame futhi ahlangane ukulwa nalokhu kwanda kwaleli gciwane.
Ukuphawula kanye nokwenza kwe- European Union mayelana negciwane iCorona: I-European Union (EU) isebenza ngazo zonke izinhlaka zayo ukuze izobhekana nalesi simo, okufaka phakathi ukuxhumana okuqhubekayo namazwe angamalungu ukuze abelane ngolwazi, ahlole izidingo futhi aqinisekise impendulo ehambisanayo ye-EU. Ngaphansi kweCross-border Health Threat Decision, ikhomishini ixhumana namazwe angamalungu ayo ngokusebenzisa izindlela ezintathu ezibalulekile okuyiThe Early Warning and Response System, iThe Health Security Commission kanye neThe Health Security Committee’s Communicators’ Network. Emizamweni yokuthuthukisa ukulungela nokuvinjwa kwaleli gciwane, sekufakwe imali engangezigidi ezingama-$232 eyayizokwabelwa imikhakha ehlukene efana neWorld Health Organisation ($124 157 400), izwekazi i-Afrika ($16 330 500), ucwaningo oludingwayo ($108 910 000) kanye neye-EU Civil Protection Mechanism eyayizosetshenziselwa ukubiyiselwa emuva kwabantu base- Europe abasuka eChina ($3 265 500).
I-African Union USihlalo omusha we-African union (AU), uMnu uCyril Ramaphosa, uhlehlise umhlangano obuhleliwe namanye amalungu e-AU ngoLwesine. I-AU ibe nomhlangano ophuthumayo nongqongqoshe bezempilo be-AU ukudingida udaba lwegciwane leCorona. I-African Centres for Disease Control and Prevention (CDC) izosebenza namazwe angamalungu e-AU kanye nabalingani bayo ukuhlinzeka ngemihlahlandlela ebanzi yokulwa naleli gciwane nokuhlanganisa izinsizakusebenza ezengeziwe ukweseka ukulungela kwezwekazi i-Afrika.
I-United States of America Federal State ICenter for Disease Control and Prevention (CDCP) icubungula leli gciwane emhlabeni jikelele futhi isiza imiphakathi ukubhekana nalesi simo ezindaweni zayo. UMnyango Wezamandla ucwaninga kahle lesifo kuzwelonke. Ihhovisi le-Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) ngaphansi koMnyango Wezempilo kanye Nezidingo Zabantu lenza imizamo yokwelashwa. ISmall Business Administration (SBA) inenkombandlela yamabhizinisi futhi ihlinzeka ngosizo lwemali oluba nenzalo ephansi uma isibuyiswa ebizwa nge-Economic Injury Disaster Loans emabhizinisini nasezinkampani ezingenzinzuzo eziphazanyiswe yiCoronavirus.
Izinguquko okhethweni lwaseHong Kong
Ukuphawula nezenzo zezwe iChina IChina ithathe izinyathelo ezinamandla kakhulu futhi ezinzima, eziningi zazo ezedlula lokho okwenziwa yiWorld Health Organisation (WHO) kanye nemithetho yezempilo zamazwe jikelele edingekayo noma esetshenziswayo ukulwa negciwane iCorona. EChina abalelwa kuma-217 amaqembu ezokwelapha, afaka phakathi izisebenzi eziyizi-25 633, asethunyelwe esifundazweni saseHubei lapho kuqhamuke khona leli gciwane. Izwe selikhiphe imali eyizi-$12 792 285 00 yokuzama ukulwa nokwanda kwaleli gciwane nokwelekelela labo asebenalo. Kusukela lulunye kuNhlolanja abantu asebelaphekile sebengaphezulu kwalabo asebebulawe yileli gciwane njengoba mhla zili-15 kuNhlolanja abantu ababalelwa kwizi-9419 base bekhululiwe ezibhedlela emuva kokululama. Kulaba umuntu omdala owayeselaphekile wayeneminyaka yobudala engama-96.
ENingizimu Afrika Ngokubheduka kwaleli gciwane iNingizimu Afrika isikuhlonze njengesimo senhlekelele (State of Disaster). Idalule uhlelo oluphuthumayo ukubheka ukuthi leli gciwane selenze umonakalo onjani. Kuvalwe ukungena kuleli kwabantu abavela emazweni asengozini ngenxa yaleli gciwane njenge-Italy, iChina, i-United Kingdom, i-United States of America, i-Iran, iSouth Korea, iSpain neGermany. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezivela emazweni athathwa njengayingozi zizohlolwa futhi ziphinde zinxuswe ukuba zizihlukanise nabantu noma zivalelwe ngazodwana (quarantine) uma zingena kuleli. Sekuzoqiniswa ukuhlolwa kwabantu ezikhumulweni zezindiza i-OR Tambo International, iCape Town International kanye neKing Shaka International. INingizimu Afrika inezintuba zokungena kuleli ezingama-72, kodwa kulezo eziphansi (land ports) ezingama-53 zingama-35 ezizovalwa kuthi kweziyisi-8 zasemanzini kuvalwe ezimbili.
Ukuhlangana kwabantu abangaphezulu kwekhulu ngokwesibalo akusavumelekile njengoba nemicimbi emikhulu kaHulumeni izomiswa. Izikole zizovalwa amasonto amane kube kusazanywa ukuthungatha izindlela zokulwa naleli gciwane. Wonke la maqhinga ukuze aphumelele, amazwe kanye nezinhlangano zomhlaba bazodinga ukuthi basebenzisane ngisho nalawo mazwe abhekene ngeziqu zamehlo ukuze kuzoliwa naleli gciwane ngoba uma kungenjalo impi ebhekene nawo (umhlaba) izofana neze leze.
Anathi Mtaka May 8, 2020